I-china ibhokisi elenziwe ngokwezifiso eliyindilinga elenziwe ngekhwalithi ephezulu yokusetha ibhokisi Umkhiqizi nomhlinzeki | I-Huaguang
Ibhokisi lesipho eliyindilinga elenziwe ngokwezifiso nebhokisi lesethi esezingeni eliphakeme
isiyingi ibhokisi lesipho
Usayizi: 30 * 30 * 20cm
Ukupakisha Imininingwane: ama-PC amathathu ku-polybag noma imfuneko sakho
Umklamo wokupakisha wukuhlola okusebenzayo komhlaba okunomqondo wokubuka njengesikhungo nezinye izinzwa ezine njengomsizi. Empilweni, impahla ngayinye ivuselela kakhulu izinzwa zabantu ngezindlela ezahlukahlukene, kubangele isifiso sokuthenga. Kungashiwo ukuthi ukuthandeka kokupakisha kungumphakathi wanamuhla usebenzisa "izinzwa ezinhlanu" zokumaketha ezikhangayo kunalokho. Namuhla, ake sikhulume ngomklamo wokupakisha ngaleli bhokisi lesipho eliyindilinga:
Umbono uyisikhungo sobuciko nokuklama, maphakathi nobuciko bokubukwa kobuciko kungabonakala yonke indawo, umbala wedizayini yokupakisha, imidwebo, umbhalo, ukuma, njll., Kusekelwe kokubonwayo njengesikhungo sokuklama, ngokusebenzisa izinto ezibukwayo nokusetshenziswa okufanele nokuhlanganiswa, ukuheha abathengi, ukwenza intshisekelo yabathengi, kukhuthaze abathengi ukuthi bathenge. Phakathi kwalezi zinto ezibonakalayo zokupakisha, umbala, njengento ebaluleke kakhulu ebonwayo, usuphenduke ifomu lolimi elibalulekile labaklami.
Futhi ukwakheka kwebhokisi lesipho, imvamisa akudingi umbhalo omningi kakhulu, njengaleli bhokisi lesipho eliyindilinga, hhayi igama. Amanye amabhokisi ezipho nawo azophrintwa ngamagama alula, afana nokubingelela noma ukubonakaliswa kothando.
Umbala ungenza abantu bakhiqize ubudlelwane obuphathekayo nobungajwayelekile, njengombala ofudumele owenza abantu bacabange ngelanga, umlilo, noma izinto ezinolaka, futhi umbala opholile ungenza abantu bazihlanganise namanzi, umoya, bacabange ngekhwalithi yobuntu enengqondo nokuzola.
Leli bhokisi lesipho libomvu ngokugqamile, umbala ofudumele onjalo ungadonsa iso labathengi, ngokubonakalayo ukuze uhehe abathengi.
Okwesibili, ubudlelwano phakathi kwezinto ezibukwayo kanye nezici zabathengi zezomnotho nezamasiko kusho ukuthi abathengi abahlukene banamakhono ahlukene kwezomnotho namazinga amasiko nezemfundo. Ukwazisa kwabo ngobuhle nezinga lempilo kwehlukile, kukhonjiswa ekwamukelweni kombala nezinye izinto ezibukwayo, kuzoba nomehluko omkhulu. Ngakho-ke, ukwakheka kokupakisha kufanele kuqaphele kakhulu ukukhetha umbala ofanele, ihluzo nezinto zokwakheka.
Ekugcineni, ukuxhumana phakathi kwezinto ezibonakalayo nemvelo yokuphila yabathengi kusho ukuthi iphakethe lihlala lisendaweni ethile yempilo yabathengi. Ngakho-ke, umbala nokuthungwa kwezindatshana ezahlukahlukene zokusetshenziswa kwansuku zonke okuhambisana nephakeji kufanele kubhekwe ekwakhiweni kwephakeji, ukwenza isithombe sokupakisha sibonakale sihambisana nendawo yokuhlala yabathengi.
Idizayini eningi yamabhokisi ezipho, kufanele iveze okuqukethwe okuzokwethulwa kumthengi ngomklamo. Amanye amabhokisi ezipho, noma kunjalo, alula kakhulu, njengamajamo amabhokisi alula futhi ajwayelekile, noma ukusetshenziswa kwemibala eqinile, futhi enza amabhokisi ezipho abe akudala futhi aqine. Njengaleli bhokisi lesipho eliyindilinga, ukwakheka kwalo okulula akukwazi ukufihla inhliziyo efudumele yomuphi.
Langaphambilini vala ibhokisi lukathayela lokugcina ibhokisi amasokisi egumbi lephepha
Olandelayo: Ibhokisi lamathoyizi lesikhwama sephepha lesikhadibhodi sezingane ngesibambo